Mobilenomics: Ọ bụrụ n’ịjighị ekwentị mkpanaaka, ịgaghị aga ahịa | Martech Zone
Ọ na-adị anyị mma na anyị hụrụ usoro teknụzụ na-abịa wee gwa gị tupu oge eruo. Anyị na-ekwu okwu banyere uto nke mobile n'ihi na ihe karịrị otu afọ ugbu a, ma, bụ ndị juru mgbe anyị mere nnọọ njikarịcha oditi maka a na-adịbeghị anya ahịa na ha enweghị mobile atụmatụ… dịghị. Ha na saịtị ahụ abụghị mobile, ha ozi na-abụghị ndị kachasị nke mobile, na ọ dịghị mobile ngwa ọdịnala na mmiri… nwe.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-ewe a video iji nweta ezi n'ọnọdụ na ihe na Erik Qualman na-arụ nnukwu ọrụ na itinye ọnụ ọgụgụ nnabata nke ekwentị. Eziokwu ahụ bụ… ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpanaka, ị naghị ere ahịa.
Tags: erik qualmanmobilenomicsọkachamarammekọrịta ọha
Ahịa ahịa dị ebe a iji nọrọ, enweghi obi abụọ banyere nke ahụ. Ndị ụlọ ọrụ na-atụle ịtụle nke a ga-abụ maka nnukwu nsogbu na ọrụ ọgbọ ha. Havekwesịrị ijide n'aka na peeji nke ọdịda gị ga-abụ onye nnọchianya nke akara gị, n'agbanyeghị agbanye ngwaọrụ eji enweta ha.